Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS) ရာသီ မမှန်ရင် ဖတ်ပါ
သမီး အသက်က အခု ၂၇ နှစ်ပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်ကတော့ 48 KG လောက်မှာပဲ ရှိပါတယ်။ အပျိုပေါ်ဝင်စ ၁၅ နှစ် လောက်ကတည်းက ရာသီသွေး မမှန်တတ်ပါ။ အခုထိ တခါတလေ ၂ လ ၃ လ ခြားပါတယ်။ ကြာချိန် ၃ ရက် လောက်ဘဲ ရှိတတ်ပြီး၊ အရမ်း ဗိုက်နာခြင်းတော့ မရှိသလောက်ပါ။ အသက် ၁၉ နှစ်တုန်းကတော့ ၆ လ အထိ ထိန်ဖူးပြီး၊ နုတ်ခမ်းမွှေး ရေးရေးလဲ သတိထားမိပါတယ်။
1. အမျိုးသမီး အသက်ကိုကြည့် ကုရတယ်။ ငယ်သူတွေကို Birth control pill ကိုယ်ဝန်တားဆေး ပေးနိုင်တယ်။ ရာသီမှန်စေမယ်၊ သားအိမ်ကင်ဆာ အဖြစ်နည်းစေမယ်။
3. Acne ဝက်ခြံပေါက်နေသူ၊ Excess hair growth အမွှေးများနေသူတွေကို Diuretic ဆီးသွားဆေး Spironolactone (Aldactone) ပေးနိုင်တယ်။ သူတေို့ကို ဒီဆေးပေးရင် Potassium levels (ပိုတက်ဆီယမ်) စစ်နေရမယ်၊ Kidney function ကျောက်ကပ် စစ်နေရမယ်။
Posted by Dr. Tint Swe at 7:53 PM